DAAWO: Kulankii xiisaha lahaa ee ay wada ciyaareen Degmada Waberi iyo Degmada Boondheere %
DAAWO: Kulankii xiisaha lahaa ee ay wada ciyaareen Degmada Waberi iyo Degmada Boondheere
By Laacib News	 On Sep 11, 2018
Degmada Waaberi ayaa marki afaraad oo xiriir ah iska xaadirisay afar-dhamaadka tartanka kubadda cagta degmooyinka Gobolka Banaadir kadib markii ay 1-0 uga adkaatay degmada Boondheere.
Labada degmo oo uu kulankan u ahaa kulanki saddaxaad oo xiriir ah oo ay tartankan isaga hor yimaadaan afarsano ee u dambaysay ee la qabto ayay waxay garoonka Banaadir kusoo bandhigeen .
Kulanka ayaa sidoo kale ahaa sanadki labaad oo xiriir ah oo ay labada degmo ku kulmaan wareega 8-da waxaana sanadki labaad oo xiriir ah guusha ay raacday degmada Waaberi waloow ay wali dhagahooda kasii guuxayso guuldaradii ay Boondheere kala kulmeen fiinaalihii 2015.
Goolka qura ee ay Waaberi guusha ku heshay waxaa qaybta labaad ee ciyaarta u saxiixay laacibka No-10 Xuseen Maxamed Xuseen kaasoo gool aad u qurux badan dhaliyay isgaoo goosha kasoo toogtay banaanka diilinta 18-aad.
Xuseen oo tartanka ku hogaaminaya 6 gool Ayaa sidoo kale noqday laacibka ciyaarta waxaana lagu guddoonsiiyay abaal-marintan oo ay bixinaysay Muqdisho Cable isagoo helay Reciever.
Abaal-marintan oo uu horay u ballan qaaday maamulka ISboortiga Gobolka Banaadir ayaa la bixin doona dhamaan kulamada tartanka ka haray.
Dhanka kale waxaa la baajiyay kulanki maanta oo talaado qorshaynaa jadwal ahaan inuu dhex maro degmooyinka Hodon iyo Xamar Wayne kadib dhibaatadii ka dhacday degmada Hodon oo ay dad badani waxyeelo kasoo gaartay.
Hodon iyo Xamar Wayne ayaa ciyaari doona maalinta Khamiista oo ay taariikhda ku beegan tahay 13 September 2018.
W/Q: Waaxda warfaafinta Xafiiska Isboortiga Gobolka
DAAWO SAWIRADA KULANKA WAABERI IYO BOONDHEERE
Milkiilaha Shirkada Mediapro Oo Kashifay Sir Xasaasi Ah Oo Ku Saabsan Final UCL Ee Xagaagan
Booliska Oo Faragelin Ku Sameeyay Buuq Ka Dhashay Xaflada Dhalasho Ee Xidig Barca Ka Tirsan [Akhri Sababta]